Akụkọ Bible: Ihe Otiti Iri Ahụ - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
LEE anya na foto ndị a. Nke ọ bụla n’ime ha na-egosi ihe otiti Jehova tiri Ijipt. Na foto nke mbụ, ị ga-ahụ Erọn ka o ji osisi na-eti Osimiri Naịl. Mgbe o mere nke ahụ, mmiri osimiri ahụ ghọrọ ọbara. Azụ̀ niile dị na ya wee nwụọ, osimiri ahụ wee malite isi ísì.
Ọzọ, Jehova mere ka mbàrá si n’Osimiri Naịl pụta. Ha jupụtara ebe niile—n’ime ekwu ọkụ ha, n’ime ite nri ha, n’elu ihe ndina ha—n’ebe niile. Mgbe mbàrá ndị ahụ nwụrụ, ndị Ijipt chịkọtara ha n’ikpo n’ikpo, ala niile wee na-esi ísì ọjọọ n’ihi ha.
Erọn wee tie mkpanaka ya n’ala, ájá niile wee ghọọ anwụnta. Ha bụ ụmụ ahụhụ na-efe efe ndị na-ata mmadụ. Anwụnta ahụ bụ ihe otiti nke atọ e tiri ndị Ijipt.
Ihe otiti ndị ọzọ mekpara naanị ndị Ijipt ahụ́, o metụtaghị ụmụ Izrel. Ihe otiti nke anọ bụ odudu, bụ́ ndị jupụtara n’ụlọ ndị Ijipt niile. Ihe otiti nke ise dakwasịrị ụmụ anụmanụ. Ọtụtụ n’ime ehi na ewu na atụrụ ndị Ijipt, nwụrụ.
Ọzọ, Mozis na Erọn kpooro ntụ ma wụlie ya elu. Ha kpatara ọnyá ọjọọ n’ahụ́ mmadụ na ụmụ anụmanụ. Nke a bụ ihe otiti nke isii.
Mgbe nke a gasịrị, Mozis chịliri aka ya elu n’ihu mbara igwe, Jehova wee zite égbè eluigwe na akụ̀ mmiri igwe. Ọ bụ akụ́ mmiri igwe kasị njọ ndị Ijipt nwetụworo.
Ihe otiti nke asatọ bụ igurube bara ụba. Ọ ka adịbeghị mgbe ọ bụla a hụrụ ọtụtụ igurube dị otú ahụ tupu oge ahụ. Ha ripịara ihe niile akụ́ mmiri igwe mebifọrọ.
Ihe otiti nke itoolu bụ ọchịchịrị. Ruo ụbọchị atọ, oké ọchịchịrị kpuchiri ala ahụ niile, ma ụmụ Izrel nwere ìhè n’ebe ha bi.
N’ikpeazụ, Chineke gwara ndị ya ka ha fesa ọbara nwa ewu ma ọ bụ nwa atụrụ n’ọnụ ụzọ ha. Mgbe ahụ, mmụọ ozi Chineke gabigara n’ala Ijipt. Mgbe mmụọ ozi hụrụ ọbara ahụ, o gbughị onye ọ bụla nọ n’ime ụlọ ahụ. Ma n’ụlọ niile ebe ọbara na-adịghị n’ọnụ ụzọ, mmụọ ozi Chineke gburu ụmụ mmadụ na anụmanụ ndị e buru ụzọ mụọ. Nke a bụ ihe otiti nke iri.
Mgbe ihe otiti ikpeazụ a gasịrị, Fero gwara ụmụ Izrel ka ha laa. Ndị nke Chineke ejikerewo ịla, n’abalị ahụ, ha malitere njem ha ịpụ n’Ijipt.
Ọpụpụ isi 7 ruo 12.
Site n’iji foto ndị dị n’ebe a mee ihe, kọwaa ihe otiti atọ mbụ Jehova tiri Ijipt.
Olee ihe dị iche n’ihe otiti atọ mbụ na ihe otiti ndị ọzọ?
Gịnị bụ ihe otiti nke anọ, nke ise, na nke isii?
Kọwaa ihe otiti nke asaa, nke asatọ na nke itoolu?
Gịnị ka Jehova gwara ụmụ Izrel ka ha mee tupu ihe otiti nke iri amalite?
Gịnị bụ ihe otiti nke iri, gịnịkwa mere mgbe ọ gasịrị?
Gụọ Ọpụpụ 7:19- 8:23.
Ọ bụ ezie na ndị na-eme anwansi n’Ijipt meghachiri ihe otiti abụọ mbụ nke Jehova, gịnị ka a manyere ha ikweta mgbe ihe otiti nke atọ gasịrị? (Ọpụ. 8:18, 19; Mat. 12:24-28)
Olee otú ihe otiti nke anọ si gosipụta ikike Jehova nwere ichebe ndị ya, mmetụta dịkwa aṅaa ka ịmara nke a na-enwe n’ahụ́ ndị Chineke ka ha na-eche “mkpagbu ukwu” ahụ e buru n’amụma ihu? (Ọpụ. 8:22, 23; Mkpu. 7:13, 14; 2 Ihe 16:9)
Gụọ Ọpụpụ 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; na 10:13-15, 21-23.
Olee òtù abụọ Fero na ndị na-eme anwansi na-anọchi anya ha, olee ihe òtù abụọ a na-enweghị ike ime taa? (Ọpụ. 8:10, 18, 19; 9:14)
Olee otú Ọpụpụ 9:16 si enyere anyị aka ịghọta ihe mere Jehova ji kwere ka Setan nọgide ruo ugbu a? (Rom 9:21, 22)
Gụọ Ọpụpụ 12:21-32.
Olee otú Ememe Ngabiga ahụ si mee ka o kwe omume ịzọpụta ọtụtụ mmadụ, gịnịkwa ka Ememe Ngabiga ahụ na-ezo aka na ya? (Ọpụ. 12:21-23; Jọn 1:29; Rom 5:18, 19, 21; 1 Kọr. 5:7)